पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरि बढ्यो !
पेट्रोलमा प्रतिलिटर २१, डिजेल र मट्टितेलमा २७ तथा हवाई इन्धनमा आन्तरिकतर्फ प्रतिलिटर १९ रुपैयाँले बढाएको निगमले जनाएको छ।
असार ६, २०७९ ७:५१
नेपाल अनलाइन पत्रिका – काठमाडौं। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरि बढाएको छ।
गएराति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल र हवाई इन्धनको मूल्य बढाएको हो। पेट्रोलमा प्रतिलिटर २१, डिजेल र मट्टितेलमा २७ तथा हवाई इन्धनमा आन्तरिकतर्फ प्रतिलिटर १९ रुपैयाँले बढाएको निगमले जनाएको छ।
अब पेट्रोल प्रतिलिटर १९९, डिजेल र मट्टितेल १९२ तथा हवाई इन्धन आन्तरिक तर्फ प्रतिलिटर १८२ पुगेको छ। एलपी ग्यासको मूल्य भने यथावत रहेको छ।
पाकिस्तानको कर बढेसँगै शेयर बजार खस्कियो !
जनार्दन शर्मा: बजेट उद्योगमैत्री छ, आत्मनिर्भर हुन कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता !
करका दर प्रचलित प्रक्रियाअनुसार नै भएको हो, राष्ट्रघातको कुरै छैन !
मधेस सरकारले ४७ अर्बको बजेट ल्यायो !
मन्त्री साहले मुख्यमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रममार्फत साना किसानको आय अभिवृद्धि गर्न, कृषि पैदावारमा आत्मनिर्भरताका लागि आवश्यक संस्थागत र संरचनागत प्रारुप तयार गरी कार्यान्वयन गर्न यस कार्यक्रमका लागि १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको हो।
चिनीको मूल्य प्रतिकिलो १०५ रुपैयाँ पुग्यो !
संघका महासचिव अमुलकाजी तुलाधरले रातोपाटीसँग चिनीको मूल्य प्रतिकिलो १० रुपैयाँ बढेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘यसअघि खुद्रा बजारमा प्रतिकिलो ९५ रुपैयाँ थियो । अहिले बढेर १०५ रुपैयाँ पुग्यो ।’
मर्जर सम्झौता नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंकबीच
बैंकले स्वापको कारण उब्रने रकम (प्रिमियम) पछि बोनस शेयर दिँदा चुक्तापुँजी ३४ अर्ब पुग्ने उल्लेख गरेको छ। यद्यपि स्वाप रेसियोको टुंगो भने सम्पत्ति मूल्यांकन प्रतिवेदन (ड्यू डेलिजेन्स रिपोर्ट) ले गर्नेछ।